Inkampani news-Tianjin Greatex Ngamazwe Orhwebo Co.,Ltd
Inkampani yethu amabhaso uxanduva kunye nentembeko. Sizabalazela ukufezekisa ubuchule bokuyila imveliso kunye nokulawulwa kwenkqubo. Siyakuqinisekisa imfashini ephezulu, ekumgangatho ophezulu, ukuhanjiswa kwexesha kunye nexabiso elifanelekileyo.
Oko sasungulwa ngo-1998 ngumongameli owabelana ngenkolelo kwimpahla yendlu esempilweni kwiintsapho zehlabathi. I-Tianjin Greatex International Trading Co, Ltd ibikhe yasebenza njengengcali kwimveliso yekhaya esekwe ngaphezulu kweminyaka engama-20.
Senza iimveliso ezinomxholo wefayibha njengekotoni, ilineni, i-polyester ukuqinisekisa ukuba abathengi bethu banandipha ubomi obusempilweni, obulungeleleneyo nobunokuzinza.
Oko sasungulwa ngo-1998 umongameli wabelana ngenkolelo yempahla yasekhaya esempilweni kwiintsapho zehlabathi. I-Tianjin Greatex International Trading Co, Ltd ibikhe yasebenza njengengcali kwimveliso yekhaya esekwe ngaphezulu kweminyaka engama-20.